Vaovao - Greenleaf dia mandefa famaranana vita amin'ny seramika mahery sy avo lenta amin'ny tsena
Greenleaf Corp. any Saegertown, Pennsylvania, dia namoaka ny XSYTIN-360, andalana famolavolana ceramic solid vita farany ambony, ho an'ny tsena manerantany.
Nandritra ny fivoriana iray manerantany momba ny Zoom izay nanambara ireo fikosoham-bary farany, Jim Greenleaf, filoha sady CEO an'ny Greenleaf Corp., dia nilaza fa ny XSYTIN-360 dia "iray amin'ireo fanambarantsika tsara kokoa nandritra izay taona maro lasa izay." Ny vokatra fitaovana boribory vita amin'ny seramika, hoy i Greenleaf, dia “efa an-dalam-pandrosoana mandritry ny roa taona, ary iray amin'ireo vokatra voasedra be indrindra natolotray.”
"Vita amin'ny fitaovana matanjaka indrindra eny an-tsena izy io, ary ny geometry dia tsy manam-paharoa," hoy izy nanampy. “[Izahay] dia nanamboatra fitaovana boribory lava indrindra sy maharitra indrindra.”
Ny famaranana dia manambatra ny zana-tsokajy mavesatra XSYTIN-1 an'ny Greenleaf miaraka amin'ny geometry manapotipotika izay nolazain'i Bernie McConnell, filoha lefitra mpanatanteraka - mpivarotra ao amin'ny Greenleaf fa manome avo folo heny ny famokarana sy ny fitehirizana vola. Ny tanjaky ny fitaovana dia ahafahan'ny mpampiasa mampiditra entana puce mitovy amin'ny famaranana karbida matevina miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa iraisana amin'ny fametahana seramika. Ireo milina famaranana seramika vaovao ireo dia manome fiakarana avo lenta amin'ny mpanjifa noho ny vokatra gazy karbida na keramika ankehitriny.
Ny fitaovana XSYTIN-1 an'ny Greenleaf, natomboka tamin'ny taona 2016, dia namboarina mba hametahana fitaovana maro karazana noho ny tanimanga hafa ao amin'ny orinasa, hoy ny orinasa. Ny firafitr'ity keramika miady amin'ny dingana ity dia mampiseho fanoherana mitafy avo sy fanoherana ny fikorontanana hafanana miavaka, izay mahatonga ny famaranana XSYTIN-360 farany vokatra azo vinavinaina, azo ampiasaina, avo lenta.
"Ny hitanao androany dia ny XSYTIN-360 [mampiseho] na aiza na aiza amin'ny 4 ka hatramin'ny 10 heny amin'ny fitomboan'ny vokatra." hoy i McConnell. "Fampisehoana manova lalao izany."
Nanampy izy fa ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny milina isan-karazany. “Tsy mila manana milina fanodinana milina 25 000 na 35,000 spindle rpms ianao. Azonao atao ny mihazakazaka azy amin'ny ankamaroan'ny ivon-toeram-pivarotana milina izay any amin'ny magazay ankehitriny noho ny hamafiny sy ny tanjaky ny fitaovana XSYTIN-360 ampiarahina amin'ny haometry fitaovana fanapahana. Tena manokatra ny fotoana tsena ho an'ny XSYTIN-360 ary tena mampiavaka antsika io. ”
Nandritra ny fanambarana virtoaly, Matt Goss, injenieran'ny rindrambaiko ary fampandrosoana ny tetikasa Greenleaf, dia nanadihady maro an-tsipiriany izay nolazainy fa nampiseho ireo milina farany XSYTIN-360 nahatratra ny tahan'ny fanesorana ara-nofo ary nampitombo ny vokatra tamin'ny fitaovana maro karazana.
Ohatra, tamin'ny tranga fitsapana iray, nampiasa vy vy 4150 ny orinasa niaraka tamin'ny tanjaka 53 hatramin'ny 55 Rockwell, ary ny fiakarana dia nahatratra fiakarana 6X tamin'ny hafainganam-pandeha, ary fiakarana 28 isan-jato tamin'ny sakafo isaky ny nify.
"Ny vy mafy 4150 dia tsy fitaovana tena kendrena amin'ny famaranana seramika mahazatra, saingy hitanay fa ny fitambaran'ny fitaovana fototra XSYTIN-1 sy ny géometra mitoka-tsainay tsy manam-paharoa dia afaka nanao tsara sy nahazo fiainana fiainana tena tsara izahay. », Hoy i Goss. “Nisy fihenam-bidy lehibe koa teo amin'ny fotoana tsingerina. Nahita fihenam-bidy nandritra ny enina ora mahery izahay. Maharitra enina ora na mihoatra ny fotoana fihenan'ny karbidaidra, ary latsaka ny adiny iray no nanaovanay azy. ”
Ireo milina famaranana dia voaporofo fa mahomby tokoa rehefa milina fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny alloys amin'ny mari-pana avo lenta, ny metaly avo lenta voaangona 3D-pirinty, ny vy vy mafy, ny vy fantsom-boaloboka ary ny vy grafita (CGI). Amin'ny vy mihamafy, ny fiainan'ny fitaovana XSYTIN-360 farany famaranana dia voaporofo fa mitovy amin'ny famaranana karbida avo lenta rehefa mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta (11,460 RPM), ary manala ny 73 santimetatra toratelo (mihoatra ny 1200 metatra toratelo ) ny ara-nofo.
"Ity no fiandohan'ny fidirana an-tsehatra amin'ity kianja ity," hoy i McConnell nandritra ny fivoriana. "Efa misy ny fanitarana portfolio-vokatra manaraka amin'ny asa, ary faly izahay amin'izany. Ho avy tsy ho ela, tsy ho ela. ”
Raha mila fanazavana fanampiny momba ity vokatra ity dia tsidiho ny www.greenleafcorporation.com/xsytin-360.php na telefaona 814-763-2915.